Banaanbax ka dhan ah Gudiga Doorashooyinka S/land oo ka dhacay Ceerigaabo. – Radio Daljir
Banaanbax ka dhan ah Gudiga Doorashooyinka S/land oo ka dhacay Ceerigaabo.
Nofeembar 27, 2012 3:17 b 0
Ceerigaabo, Salaasa Nov 27, Magaladda Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa maanta waxaa ka dhacay dibad bax rabshado wata kaasoo ka dhashay muran la xiriira goobaha la geynayo sanaaduuqda codbixinta golayaasha deegaanka ee maamulka Somaliland.
Dibad baxan waxaa abaabuley kooxo ka caraysan qaabka loo qaybiyey goobaha la geynayo codbixinta sanaaduuqda Doorashooyinka ee maamulka Somaliland kuwaasoo sheegay inaan si cadaalad ah loo qaybin, dadka dibad baxayey ayaa dhagxaan ku tuuray halka hada lagu hayo Sanaaduuqda Codbixinta oo galabta la geynayo goobaha codbixinta.
Intaasi kadib ayaa waxaa dadkii mudaharaadayey weerar kusoo qaaday kooxo iyagu taageersan gudiga Doorashooyinka iyo qaabka loo qaybiyey goobaha codbixinta waxaana banaanbaxu isu bedeley is rasaasayn dhexmartay laba beelood oo deegaanka wada dega.
Israsaasaynta ayaa socotey mudo kooban iyadoo ay ciidamo ka tirsan maamulka Somaliland soo kala dhexgaleen islamarkaana joojiyeen israsaasayntii labada dhinac .
Magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa ah magaalo loo degan yahay nidaam beeleed wax loogu qaybsado 4 dhinac waxaana dhinacyada wada dega magaaladaasi kala aaminsan yihiin siyaasado kala gedisan taasoo khilaaf ka dhex dhalisay marar badan beelaha halkaasi wada dega, Waxaana xiligan Khilaafku dhexyaalaa laba dhinac oo isku Siyaasad aaminsan.
Gudoomiye kuxigeenka ururka Xaqsoor ee Somaliland oo xiriyadiisa dib u helay.